Enda-Kumazano & Zvinonetsa KuHotera Kushambadzira muPost-Covid Era » Martech Zone
China, November 19, 2020 China, November 19, 2020 Unnathi Rayaprolu
Iyo yakasarudzika nguva yegore yakatenderedza kona, iyo nguva iyo isu tese tinotarisira kuzorora pamwe nevatinoda uye zvakanyanya kukosha kuita mumirwi yekutenga zororo. Kunyangwe zvakasiyana nemazororo akajairwa, gore rino rinomira rakaparadzana nekuda kwekukanganiswa kwakapararira neCOVID-19.
Ipo nyika ichiri kunetseka kugadzirisa kusagadzikana uku uye kudzosera kumashure kune zvakajairwa, tsika zhinji dzezororo dzinozoonawo shanduko uye dzinogona kutaridzika zvakasiyana gore rino sezvo divi redhijitari rekupemberera mazororo aya rinobata hunhu hutsva.
Mahoridhe Makuru Kupfuura Iyo Globe
Source: MoEngage Holiday Kushambadzira Nongedzo
Holiday Kushambadzira Matambudziko mu2020
Muna 2018, nguva yezororo yekutengesa uye yekutengesa e-commerce yakapfuura iyo trillion-madhora maka kwenguva yekutanga zvachose. Kunyangwe gore rino kutengesa kwacho kungave kunonoka asi kuve nehurongwa hwakakodzera uye chiteshi kunogona kubatsira mabhenji kusundira zvigadzirwa kuburikidza nemadhigadhi edijithali
Ndichiri muUS neEurope - Nhema Chishanu, Cyber ​​Muvhuro, uye Kisimusi & Kutengeswa kwegore Nyowani zvinozivikanwa. muSouth East Asia neIndia - Diwali, 11:11 [Kutengeswa kwezuva rimwe chete] (Mbudzi), Harbolnas (Zvita), uye Chishanu Chishanu zvinotonga vatengi.
Neshanduko mumashandisirwo emashandisirwo, zvido zvevashandisi uye simba rese rekutenga revatengi, zvigadzirwa zvinofanirwa kushandura marongero avo ekutengesa ezororo kuti vawane zvido zvitsva. Heano mamwe ematambudziko anokonzerwa nedenda rinogona kutadzisa kurerukirwa kweHoridhe Kushambadzira:
Vatengi vanonyanya kukoshesa-kuziva: Vatengi kunyanya mamireniyamu vakachinja mashandisiro avo emashandisirwo uye vabva paku swipers kuenda kune ma saver. Vatengi vanozove vanokosha-vanoziva uye vasinga nyanye kusimuka pavanenge vachitenga.
Supply Chain kuendesa nyaya: Nezvakakiyiwa uye zvinorambidzwa zvekufamba pasirese, mashandiro emaindasitiri ekutengesa akarova zvakanyanya. Muna Kubvumbi, kutengesa kwekutengesa muUnited States kwakadzikira ne16.4% 3 nekuda kwekutakura zvinhu. Zvinetso zvakaita sekushomeka kwevashandi, zvirambidzo zvekufambisa, uye kuvhara muganho zvakawedzera kunhamo yekutakura kwenguva refu.
Kusada kutenga muchitoro: Vanhu vari kungwarira uye zvakanyanya kunyanya nezvekuenda kuchitoro. Dhijitari nekutenga pamhepo zvakatora nhanho. Kunyangwe mabhureki ari kuziva maitiro aya uye achipa zvinorema zvidzikiso zvekutengesa pamhepo kuchengetedza vatengi kuchengetedzeka mupfungwa.
Bounce Kudzoka Mazororo Mazano
Mahoridhe anowanzo tenderera pamanzwiro uye kubatana kwevanhu. Mhando dzinofanirwa kuwedzera izvo zvekuwedzera kune avo ekutaurirana nzira kuti vatengi vatorere kune zvigadzirwa zvavo. Zvinoenderana ne kudzidza neUnited Kingdom-based Institute of Practitioners muKushambadzira, mishandirapamwe ine zvemukati zvemukati zvinoitwa zvakapetwa kaviri pamwe neizvo zvine zvine musoro zvemukati (31% vs. 16%). Sawe mushambadzi, iwe unozofanirwa kuona kuti mishandirapamwe yako yakanangana nemufaro, kubatana, uye mhemberero. Heano mashoma marongero emhando yekutora:
Kuwedzera kukosha kwe curbside pick-ups: Dhirivhari isingataurike ndiyo kiyi; vatengi vanotarisira kumakemikari anotora matanho akakwana ekuchengetedza ayo anozovakawo kuvimba. Curb mativi ekutora-kumusoro anozove akakura mwaka uno wezororo kudzivirira kumhanya-muchitoro nekumira mitsara.
Tarisa pane kushambadzira nhare - Maererano ne Adobe's 2019 Holiday Recap, 84% ye e-commerce kukura kwakaverengerwa mumwaka wezororo muUnited States kwakaitwa kuburikidza nefoni. Kutarisa kwakanangidzirwa uye nzvimbo yakapihwa zvinopihwa zvinogona kuwedzera kubatanidzwa kwemakemikari uye pakupedzisira kutengesa.
Kunzwira Tsitsi: Ichi hachina brainer uye chaicho chinofanira kuita. Mhando dzinofanirwa kutarisa pamanzwiro uye kudzivisa mu-mu-kumeso kushambadzira uye kuve nehunyengeri nekutumira mameseji. Ivo vanofanirwa kuumbiridza kubatana nevatengi munguva dzino dzakaoma.
Tarisa pane Digitization: Kugamuchira chiteshi chedigital ndiyo sarudzo iri pachena kune vatengesi. Kutengesa kwepamhepo pamhepo kwaive kwakakwirira muna Chikumi zvichienzaniswa neyakajairika-denda muFebruary.
Svikira vamwe vashandisi vane yakagadziriswa Push Notifications: Wepakati mushandisi anogamuchira anopfuura makumi matanhatu neshanu zviziviso pazuva! Mhando dzinofanira kurwisana kunze uye kukwira yavo yekushambadzira ziviso mutambo. Usarega zviyeuchidzo zvako zvichirasika mutereyiti yekuzivisa, zvimire nezvizhinji zvakapfuma & zvakavanzika izvo zvakaoma kupotsa.
Kugadzirisa nhare yekutengesa nharembozha zvisati zvaitika uye kushandisa omnichannel nzira inogona kubatsira kuwedzera kubatanidzwa kusvika pamwero mukuru pamwe nekupa zvikwereti zvakakura nemitengo kune vatengi. Kugadzirisa uye kugadzirisa hunhu kuchakunda mwaka uno wezororo. Rega zororo mufaro ritange!
Dhawunorodha iro MoEngage Holiday Kushambadzira Nongedzo
Tags: 11: 11KisimusiCOVID-19kutora-kukwiradigitizationjogirafi yepasiresehabolnasgwaro rekushambadzira rezororomwaka wezororomobile marketingnhare yekutengesa nziramoengagepost-coviddzikisa noticeschitorokumaodzanyemba kumabvazuva kweAsia mazororo
Unnathi mushambadzi ane shungu yekudzidza chero chinhu chitsva uye kufarira tsika dzakasiyana kana uchifamba. Anofarira kuverenga kwakanaka uye nekapu yekofi chero nguva yezuva.
Kwatinofanira Kugadzirira, Kubatanidza, Kugadzirisa, uye Kusimudzira Yako Podcast